Esi gbanwee foto buut na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Esi gbanwee foto buut na Windows 10
Onye ọrụ ọ bụla bụ ụwa. Onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịhazi sistemụ arụmọrụ ha kachasị ka ọ dịrị mma dịka o kwere mee. N'agbanyeghị oke nhazi nhọrọ nke Windows 10, maka ugbu a, anyị ga - eme ya na-abanye na ngwa ndị ọzọ iji nwee ike ịgbanwe foto buut na Windows 10. Ọ dịkarịa ala maka ugbu a, mana ọ nwere ike ịbụ na na mmelite n'ọdịnihu ụmụ okorobịa si Redmond ga-ekwe ka ị gbanwee oyiyi buut na Windows 10.
Iji gbanwee onyonyo mmalite na Windows 10 anyị ga-eji ngwa nbanye Lockscreen Image Changer, obere ngwa na-adịghị mkpa itinye ya iji gbanwee onyonyo mmalite. Nbanye Lockscreen na-agbanwe faịlụ sistemụ maka igosipụta ndabara ndabara, ya mere, dị ka ngwa ọ bụla na-agbanwe ndekọ ma ọ bụ ins na windo, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eji ya.
Nbanye Lockscreen Image Mgbanwe ọ dị mfe iji. Anyị kwesịrị ibudata ngwa ma gbaa ya ọsọ. Ozugbo emepere ngwa ahụ, a ga-egosipụta ihuenyo ndabara ebe anyị ga-ahụ onyogho nke Windows gosipụtara ugbu a na mbido ihuenyo. Na okpuru anyi chotara igbe onu anyị ga-pịa ịchọta onyonyo anyị chọrọ iji dị ka mbido oyiyi na Windows 10. Tupu ikwenye na nke a bụ onyonyo achọrọ, anyị nwere ike pịa Preview iji hụ otu esi egosipụta ihe onyonyo ahụ oge ọ bụla anyị malitere PC anyị na Windows 10.
Ọ bụrụhaala na Microsoft ekweghị ka anyị gbanwee ihe oyiyi anyị nke mmalite menu na Windows 10, anyị ga-eme ya inwe ịnọgide na-eji nke a magburu onwe ngwa, yabụ ị ga-edobe obere ngwa a ọfụma, ebe faịlụ a kwadobere na Onye Mmepụta OneDrive nwere ike ọgaghị adị maka ndị ọrụ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbanwee foto buut na Windows 10
ma na-ehichapụ data gị?
Enwere m nsogbu na ngwa a, ejirila m ya mana ugbu a anaghị ekwe ka m tinye pc na nbanye nbanye, ọ na-egbu maramara ma na-ebugharị enweghị ụzọ ịbanye n'ọnọdụ nchekwa ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla
Na njedebe, ọ na-esiri m ike ịhazi pc ahụ, kpachara anya maka ịwụnye mmemme a nke nwere ike ime gị dịka m, ihe mere m ị nwere ike ịgụ na nkọwa dị n'elu
M ji onwe m jiri ngwa a ma o nyeghị m nsogbu ọ bụla na ọrụ ya.
Zaghachi Ignacio López
Ọfọn, ọ bụrụ n'ikpeazụ m ga-edozi ya n'ihi na ọ gaghị ekwe ka m banye nbanye m, okirikiri nke ị na-ebu ma na-egbu maramara mgbe niile malitere, ma eleghị anya ọ bụ n'ihi ụdị Windows m nwere Home ma ọ bụ ụdị nke processor ahụ si 64 bit
Ọ bụ eziokwu na otu ihe ahụ dakwasịrị m mana ọ dịghị mkpa ịkpụzi, ọ dị mkpa iji weghachite usoro ahụ ruo oge ikpeazụ ebe ọ rụrụ ọrụ nke ọma maka gị ma dozie okwu ahụ n'ihi na n'onwe m nsogbu ahụ dakwasịrị m na Aga m arịọ ha ka ha dozie ya n'ihi na achọrọ m ịgbanwe ụdị onyonyo ahụ gwụrụ m ike. N'otu ụzọ, ekene maka onyinye gị.
Marrana est ngwa dijo
Wtf bụ ihe nzuzu etinyela ya n'ihe ize ndụ !!
Zaghachi ngwa Marrana est
Daalụ maka ịkwado ngwa ọrụ ahụ, ahụrụ m na ọtụtụ ndị ọrụ nwere nsogbu na mmemme a, mana agbanyeghị m ga-anwale ya wee hapụ gị okwu m banyere otu o si arụ ọrụ.
Ngwa 7 iji nweta ọtụtụ ihe na Instagram
Igwe 10 nwere igwefoto kacha mma n'ahịa